Teknolojiyada SONGZ | Songz Gawaarida Hawada Co., Ltd.
La aasaasay bishii Juun, 2011 oo xarunteedu tahay Shanghai, Machadka Cilmi-baarista Qaboojiyaha & Qaboojinta wuxuu xarumo R&D ka sameeyay magaalooyin kala duwan oo ku yaal Shiinaha, sida Beijing, Chongqing, Nanjing, Hefei, Liuzhou, Suzhou iyo Xiamen halkaasoo inta badan saldhigga wax soo saarka SONGZ uu ku yaallo iminkana uu leeyahay xarumo farsamo oo heer gobol iyo degmo iyo in ka badan 350 farsamo yaqaan injineernimo ah, oo ay ka mid yihiin kuwa haysta shahaadada mastarka iyo kuwa ka sarreeya in ka badan 10%.
Machadka Cilmibaarista ayaa codsaday in ka badan 400 shatiyada, oo ay ku jiraan in ka badan 100 shatiyada abuurista, waxaana la sameeyay 2 heer qaran, 3 heerar warshadeed iyo in ka badan 40 heerar ganacsi. Machadka Cilmi-baarista wuxuu ku shaqeeyaa iskaashiga warshadaha-jaamacadda-cilmi-baarista ee kulliyadaha iyo jaamacadaha sida Jaamacadda Shanghai Jiaotong, Jaamacadda Tongji iyo Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyadda ee Shanghai ee horumarka farsamada, horumarinta habka warshadaha, kobcinta tayada sare iyo is-weydaarsiga tacliinta.
In 2018, ka dib markii SONGZ ay heshay oo ay ku yeelatay saamiyada Finland Lumikko, xarunta R&D ee Yurub ayaa la sameeyay.
Muuqaalka SONGZ Bixinta
R&D Caqli gal
Iyada oo ku saleysan ganacsiga ugu weyn ee SONGZ berrinka qaboojiyaha basaska, qaboojiyaha baabuurta, qaboojiyaha tareenka transit-ka, cutubyada qaboojiyaha gawaarida, machadka cilmi baarista qaboojiyaha iyo qaboojiyaha wuxuu ku howlan yahay dhismaha iyo adeegsiga 10 awoodaha muhiimka ah.
Xarunta Sheybaarka ee SONGZ
Xarunta sheybaarka SONGZ waxay ku taalaa SONGZ HQ, Shanghai China, oo lagu qalabeeyay in ka badan 20 nooc oo ah qalab tijaabooyin waaweyn iyo kuwa dhexdhexaad ah. Qalabyada badankood waa hoggaanka gudaha. Godka dabaysha cimilada, keydka tijaabada waxqabadka qaboojiyaha, qolka semi-anechoic iyo qalab kale oo muhiim ah ayaa gaaray heer sare oo caalami ah. Waxay leedahay awooda tijaabada oo dhameystiran oo loogu talagalay qeybta qaboojiyaha, nidaamka AC, HVAC iyo gaariga oo dhan. Nidaamka CRM waxaa laga qaatay xarunta imtixaanka si loo maareeyo habka baaritaanka, xogta iyo qalabka. Sannadkii 2016, waxaa loo aqoonsaday nidaamka ISO / IEC 17025: 2005 nidaamka adeegga aqoonsi qaran ee Shiinaha ee qiimeynta waafaqsanaanta iyo 2018, xarunta sheybaarka SONGZ waxaa lagu aqoonsan yahay BYD inay tahay Shahaadada Aqoonsiga Sheybaarka Alaab-qeybiyaha.
Bench Tijaabada Volume Hawada
Joogto joogto ah. & Qolka Imtixaanka Qoyaanka
Bench Imtixaanka Gudaha
Shahaadada Aqoonsiga Sheybaarka ee ka socota CNAS
Shahaadada PSA A10 9000
Tunnelka Dabaysha Cimilada
SONGZ godka dabaysha cimilada ayaa markii ugu horreysay Shiinaha ku dhex daray nidaamka sahaminta otomaatigga ah iyo khariidaynta. Iyada oo ku saleysan sawir-qeexid sare iyo tikniyoolajiyadda farsameynta muuqaalka, aagga kala-bixidda waxaa lagu cabiray laguna xisaabiyay waqtiga dhabta ah, taas oo si wax ku ool ah u wanaajisay waxtarka imtixaanka. Sidoo kale waa tunnelka ugu horreeya ee cimilada hawada isku xira 60 kW DC oo si dhakhso leh u xajinaya, kaas oo bixiya dammaanad xoog leh oo ku saabsan horumarinta nidaamyada maareynta kuleylka batteriga batroolka cusub.
Xarunta tuneelka dabaysha cimilada waxay ku taalaa SONGZ HQ, oo ku taal Shanghai, Shiinaha, oo baaxaddiisu dhan tahay 1,650 m² waxayna leedahay maalgashi dhan USD 17 milyan. Waxaa si rasmi ah loo adeegsaday bishii Juun 2018, heer farsamadeeduna waa mid caalami ah.
Tijaabada qaboojiyaha waxqabadka qaboojinta gawaarida, tijaabada qaboojinta gawaarida ugu badan ee tijaabada waxqabadka, baaritaanka qabowga bilowga gaariga, baaritaanka qalabka hagaajinta hawo qaboojiyaha, baaritaanka qaboojiyaha gawaarida / baaritaanka waxqabadka defogging, tijaabada waxqabadka qaboojinta, tijaabada waxqabadka qaboojinta ee xaaladaha shaqada ee magaalooyinka caadiga ah. , Nidaamka qaboojiyaha nidaamka tijaabada jawaab celinta firfircoon.
Naqshadeynta iyo soo saarista nidaamyada hoosaadyada dhammaantood waxay korsadaan alaab-qeybiyeyaal aad ugu wanaagsan warshadaha. Jilidda qoraxda, mashiinka 'Dynamometer', taageere weyn, nidaamka qaboojinta, qolka tijaabada iyo qalab kale oo waaweyn ayaa laga soo dhoofiyay Jarmalka, waxay u ekeysiin karaan -30 ℃ - + 60 temperature heerkulka deegaanka, 5% -95% ee huurka deegaanka, oo leh qorraxda buuxda shaqada jilitaanka waxayna fulin kartaa qalabka mitirka korantada ee afar-giraangir.
Tunnelka dabayshu ma tijaabin karo oo keliya qaboojiyaha iyo nidaamyada qaboojinta ee baabuurta caadiga ah ee rakaabka, laakiin sidoo kale tijaabooyinka joogtada ah ee basaska dhererkoodu yahay 10 mitir oo dherer ah iyo 10 tan oo culeys ah.
Cilmi baaris iyo Dkobcinta Isbeddel ee New Etamarta
1. Cilmi baaris ku saabsan dalabka qaboojiyeyaasha kala duwan
Maya Qaboojiyaha Aaladda 'Ozone' oo yareysa(ODP) Awoodda Kulaylinta Adduunka (GWP)
2. Codsiga tiknoolajiyada cirbadeynta uumiga ee la xoojiyay ee aaladda hawo qaboojiyaha
Ka dib markaad isticmaasho kororka sii kordhaya adoo buuxinaya tiknoolajiyada gaaska, heerkulka deegaanka -25 ℃, nidaamka qaboojiyaha wuxuu socon karaa kuleyl caadi ah, marka la barbardhigo qalabki hore ee xaalada qiimaha COP wuxuu kordhi doonaa in ka badan 30%, taasoo horseedaysa xilligii "qabow" .
Kordhinta Enthalpy ee dib-u-buuxinta shaxda gaaska AC
3. Bamka kuleylka ee heerkulka hooseeya:
Mashiinka kuleylka ee heerkulka halista ah ee hadda jira - 3 ℃, wuxuu yareyn karaa - 20 darajo Celsius;
Waxtarka tamarta ayaa ka fiican isticmaalka hadda jira ee habka kululaynta caawiyaha korantada PTC, bartilmaameedku waa 1.8.
4. Codsiga kombaresarada CO2 - bamka kuleylka / heerkulka kuleylka ee heerkulka hooseeya
Codsiga qaboojiyaha deegaanka ee dabiiciga ah ee CO2;
Laba rotor laba jibbaare laba jibbaare ah - isku soo ururin marxalad, waxtarka mugga sare, gariirka yar;
Cadaadis sare oo gudaha ah iyo danab dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah dc inverter, 40 ~ 100Hz, hawlgal ballaadhan oo ballaadhan; Isku halaynta sare, waxtarka tamarta sare, fudaydka ；
Baaxadda hawlgalka ballaaran, gudaha - 40 temperature heerkulka deegaanka ayaa ka liita kuleylka caadiga ah.